मुख्य न्यायधिवक्ता आचार्यद्धारा सपथ ग्रहण - Arunkhabar.com
प्रकाशित : १२ चैत्र २०७४, सोमबार १८:३७
Tadalis SX online, buy dapoxetine online. विराटनगर, १२ चैत । दुई साता अघि नियुक्ती हुनु भएका १ न. प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यले आज सपथ लिनु भएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायधिश डा कुलरत्न भूर्तेलले आचार्यलाई पद तथा गोपनियताको सपथ गराउनुभयो । प्रदेश प्रमुख प्रा.डा गोविन्द तुम्वाहाङको उपस्थितिमा उहाँलाई सपथ गराइएको हो ।
नेपालको संविधान २०७४ को धारा १६० अनुसार आचार्यलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नियुक्तीको लागी चैत २३ गते सिफारिस गर्नु भएको थियो । मन्त्रीपरिषदको सिफारिस पछि आचार्यलाई चैत २५ गते प्रदेश प्रमुख तुम्वाहाङले नियुक्ती गर्नु भएको थियो । आचार्य मुख्यमन्त्रीको कानूनी सल्लाहाकारका रुपमा रहनु हुने छ ।
उच्च अदातलको न्यायधिश सरह उहाँले काम गर्नुहुने छ । बरिष्ठ अभिवक्ता भैसकेका वकिलहरुबाट न्यायधिवक्ता नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
आचार्य २०५७ सालमा नेपाल वार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र २०५० मा मोरङ जिल्ला अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो । सपथ समारोहमा मुख्यमन्त्री राई, सभामुख प्रदिप भण्डारी, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, मन्त्रीहरु, सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति थियो ।pharmacies